जो कहिल्यै धनी बन्न किन सक्दैनन् ? –
गृह पृष्‍ठ खबर जो कहिल्यै धनी बन्न किन सक्दैनन् ?
जो कहिल्यै धनी बन्न किन सक्दैनन् ?
प्रकाशित मिति : २०७७ माघ २० , मंगलवार ०७:५६
भनिन्छ कुनै पनि मानिस गरीब भएर जन्मनु उसको कमजोरी होईन तर गरीब नै भएर मर्नु चाहिँ उसको कमजोरी हो । त्यसो भए कसरी सफल बन्ने त ?
कुलतमा फसेका व्यक्तिः कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुले पनि जीवनमा धन हात पार्न सक्दैनन् । यीनिहरु कहिल्यै धनको सदुपयोग गर्न जान्दैनन् । जतिसुकै कमाउने मानिस किन नहोस् यदि ऊ कुलतमा फसेको छ भने कहिले धनी बन्न सक्दैन् ।(एजेन्सीको सहयोगमा
पछील्लो पोस्ट ७७ जिल्लामै भूमि आयोग गठन (नामावली सहित )
अगिल्लो पोस्ट बख्तरबन्द गाडी सडकमा , सेनाले भन्यो- ‘हामी अभ्यासमा छौँ, अभ्यास काम लाग्न सक्छ’, बख्तरबन्द गाडी सडकमा शंकाको घेरामा
‘जुम्लामा दैनिक साढे ७ घण्टा मात्रै बिजुली दिन सकिन्छ’ : प्राधिकरण